China Collagen for Nutrition Bar ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
I-Collagen ibha yokudla ingumkhiqizo omusha wokushintshwa kwesidlo webha yokusanhlamvu enempilo futhi emnandi yabantu. Amabha wokudla we-Collagen ukutholakalela ukushintshwa kokudla ngeke kusabeka umkhawulo lapho kudliwa khona, okuhambisana kakhulu nemikhuba yokuphila yabantu abasha namuhla.
Uzozizwa kahle ngokudla lokhu ibha yokudla ye-collagen: Yenziwe nge-collagen ukuxhasa isikhumba, amathambo namalunga kanye namafutha wekhwalithi wamandla aqinile. ICollagen ingcina ebamba konke ndawonye. Njengoba sikhula, umkhiqizo uyancipha. Imikhiqizo yethu igxila enhlalakahleni evela ngaphakathi.Ngokuthuthuka okusheshayo kokudla okunomsoco kulezi zinsuku, amaprotheni yisithako esithandwa kakhulu.
Kepha ekudleni okusebenzayo nakwizithasiselo zokudla, ukufaka amaprotheni amaningi kumkhiqizo wokugcina kungaba yinkinga.
Kodwa-ke, ngosizo lobuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukisiwe beGelken, i-collagen powder ingasetshenziswa kalula ukukhiqiza imigoqo yokondla ye-collagen ngokufinyelela kokungu-35% kokuqukethwe kwe-collagen.Kudingeka ubuchwepheshe obuningi bezobuchwepheshe, bokudla okunomsoco nokulawula ukuze kuqondwe inqubo yokuthuthukiswa kwemikhiqizo enenani elengeziwe.
Sihlala siqapha izimakethe zomhlaba wonke nezitayela zabathengi ukusiza amakhasimende ethu athuthukise izindlela ezintsha zokwenza imikhiqizo emisha.
Noma ngabe kuvela ekusekelweni kwezobuchwepheshe, ukwakheka noma ukuthuthukiswa komqondo, kanye nezeluleko zokudla okunempilo nezomthetho, sinikeza ukuholwa nobuchwepheshe kulo lonke uchungechunge lwenani ukusiza amaklayenti ethu abambe amathuba anamandla okukhula okusha kwe-collagen emakethe.ICollagen inamandla ngokukhanda, isiza ukunikeza isakhiwo emzimbeni nokudlulisa amandla emisipha, kodwa okungaziwa kangako ukuthi nayo iyasebenza ngokomzimba.
UGelken uyakwazi ukuthola ukulandelana okulungile kwama-peptide futhi ahambise ama-peptide e-bioactive collagen avaliwe ku-collagen yemvelo emzimbeni nomaphi lapho edingeka khona.I-Collagen ingumthombo omuhle kakhulu we-collagen supplementation ngoba ivuselela umzimba ukuthi ukhiqize i-collagen eningi.
Langaphambilini ICollagen Yezimonyo
Olandelayo: I-Collagen yesiphuzo esiqinile